गर्मी - Best of Japan
तस्विरहरु: Hydrangeas - ती वर्षाका दिनमा बढी सुन्दर हुन्छन्!
जुनदेखि जुलाईको पहिलो आधासम्म, जापानमा होक्काइडो र ओकिनावा बाहेक, "त्सुय" भन्ने वर्षाको मौसम जारी छ। यस समयमा धेरै बरसातका दिनहरू छन्, र इमान्दारीपूर्वक यो यात्राको लागि उपयुक्त छैन। तर यस समयमा, उत्कृष्ट फूलहरूले तपाईंलाई स्वागत गर्दछन्। ती हाइड्रान्जाहरू हुन् जुन म यस पृष्ठमा प्रस्तुत गर्दैछु। जबकि चेरी फूलहरू ओसिलो र सजिलैसँग फैलिन्छ, हाइड्रेंज्या फूलहरू अझ सुन्दर हुन्छन् जब उनीहरू वर्षाद्वारा हिर्काइन्छन्। यी प्रहारित फूलहरूमा चेरी फूल भन्दा पूर्ण रूपमा भिन्न सौंदर्य हुन्छ। के तपाई हाइड्रेंजियाका फूलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? जापानमा हाइड्रान्जाजको फोटो हाइड्रान्ज्यास बरसातको मौसममा राम्ररी खिलिरहेका छन् = शटरस्टक हाइड्रान्ज्यास बरसातको मौसममा राम्ररी खिलिरहेका छन् = शटरस्टक हाइड्रान्ज्यास बरसातको मौसममा राम्ररी खिलिरहेका छन् = शटरस्टक हाइड्रान्ज्यास बरसातको मौसममा राम्ररी फूलेको = बरसातको मौसममा शटरस्टक हाइड्रान्जस राम्ररी फुल्यो = शटरस्टक हाइड्रान्ज्यास बरसातको मौसममा राम्ररी फुल्यो = शटरस्टक हाइड्रान्ज्यास बरसातको मौसममा राम्ररी फुल्यो = शटरस्टक हाइड्रान्ज्यास बरसातको मौसममा राम्ररी फूलेको छ = शटरस्टक म अन्तमा पढ्दा तपाईंको कदर गर्छु। "जून" मा फिर्ता
अगस्ट होक्काइडोमा भ्रमणका लागि उत्तम मौसम हो भनिन्छ। यद्यपि हालसालै ग्लोबल वार्मिंगको कारण जापानमा आक्रमण गर्ने आँधी बढ्दै गएको छ र होक्काइडोमा पनि आँधीबेहरीको क्षति सजिलै देखिन सक्ने भएको छ जुन अहिलेसम्म आंधीको प्रभाव नभएको बताइएको छ। यद्यपि होक्काइडो मूल रूपमा अगस्तमा सहज छन्, कृपया भर्खरको मौसम पूर्वानुमानको बारेमा सचेत रहनुहोस्। यस पृष्ठमा, म अगस्तमा होक्काइडो मौसमको बारेमा व्याख्या गर्नेछु। अगस्तमा मौसमको कल्पना गर्न सजिलो बनाउनको लागि, म तल अगस्टमा लिइएको फोटोहरू समावेश गर्दछु। कृपया जब तपाइँ तपाइँको यात्रा योजनाको योजना बनाउँनुहुन्छ सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईलाई अधिक जान्न को लागी महीना को लागी स्लाइडर को उपयोग गर्नुहोस्। तल अगस्तमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। अगस्त र होक्काइडोको बारेमा प्रश्नोत्तर अगस्तमा होक्काइडोमा हिउँ पर्दछ? अगस्तमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन। के फूलहरू अगस्तमा होक्काइडोमा फूलेका छन्? होक्काइडोमा, फूलका फूलहरूमा विभिन्न फूलहरू फूल्छन् र ती धेरै रंगीन हुन्छन्। अगस्तको सुरुवात सम्म ल्याभेन्डर खिल्यो। अगस्तमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ? होक्काइडोमा पनि, यो अगस्तको दिनको समयमा तातो छ। तर बिहान र साँझ तुलनात्मक रूपमा सुन्दर छन्। अगस्टमा होक्काइडोमा हामीले कस्ता लुगा लगाउनु पर्छ? यदि तपाईं अगस्तमा होक्काइडोको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया गर्मीको लुगा तयार पार्नुहोस्। बिहान र बेलुका यो चिसो भएको कारणले तपाईंले ...
ओसाका अगस्टमा मौसम! तापमान र वर्षा
यस पृष्ठमा, म अगस्तमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु। म पहिले ओसाकामा बस्थेको छु। ओसाका अगस्त मा वास्तव मा तातो छ। त्यसो भए, यदि तपाईं अगस्तमा ओसाकामा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं कहिलेकाँही वातानुकूलित कोठामा खर्च गर्नुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो शक्ति खपत गर्नुहुन्न। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अगस्तमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। ओसाकामा मौसम अगस्तमा (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा अगस्तमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) ओसाकाको मौसम होन्शुका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै टोकियो जस्ता समान छ। जे होस्, टोकियो आदिको तुलनामा, ओसाका शहरको केन्द्र अगस्टमा थोरै तातो छ। ओसाकाको बीचमा, हरियो सानो छ, केहि ओसाका कासल र अन्य बाहेक। डामर सडक बलियो सूर्यको प्रकाशको साथ तातो हुँदैछ, त्यसैले यदि तपाईं सबै मार्गमा हिड्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईंको फिटनेस थकाउने जोखिम छ। यस कारणका लागि, म निम्न तीन चीजहरूको सिफारिश गर्न चाहन्छु। पहिले, कृपया थोरै चिसो बिहान वा साँझ घरको बाहिर घुम्न जान यथासम्भव योजना बनाउनुहोस्। उदाहरण को लागी, Namba जो एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हो ...
टोकियो मा, यो अगस्त मा धेरै तातो छ। होक्काइडो जस्तो नभई टोकियोमा आर्द्रता धेरै नै छ। त्यसोभए, यदि तपाईं अगस्तमा टोकियो भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, हावा गर्मीको कपडा ल्याउनुहोस्। एयर कन्डिसनहरू भवनमा सुनिरहेझैं, तपाईंलाई पनि ज्याकेट चाहिन्छ। अगस्टमा, आँधीले टोकियोमा आक्रमण गर्न सक्दछ। भर्खरको मौसम पूर्वानुमानसँग सावधान हुनुहोस्। यस पृष्ठमा, म अगस्तमा टोकियोको मौसम प्रस्तुत गर्नेछु। मैले यस समयमा लिइएको फोटोहरूको पनि पोष्ट गरें, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अगस्तमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। गर्मीको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। अगस्तमा टोकियोमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा अगस्टमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम अभिकरणले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) अगस्तको टोकियोमा दिनको अधिकतम तापमान लगभग हरेक दिन degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ। हालसालै यो 2010 30 डिग्री पार गरी करीव 35० डिग्री पुगेको छ। आर्द्रता पनि उच्च छ। यदि यो सुख्खा छ भने, मलाई लाग्छ कि यो खर्च गर्न अझै सजिलो छ, तर यो उच्च आर्द्रता भएकोले यो असहज हुनेछ यदि तपाईं सर्दै हुनुभएन भने पनि म दृढताका साथ धेरै मानिसहरूलाई जापान भ्रमण गर्न चाहन्छु। त्यसो भए, ...
यस पृष्ठमा, म जुलाईमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु। जुलाई अवलोकन गर्नका लागि उत्तम मौसम हो। हरेक जुलाईमा जापान र विदेशबाट धेरै पर्यटक होक्काइडो आउँछन्। होक्काइडोमा, यो दुर्लभ हुन्छ कि यो टोकियो वा ओसाका जत्तिकै तातो हुनेछ। बिहान र बेलुका तापमान ड्रप राहत दिनेछ, त्यसैले तपाईं वास्तवमै आरामदायी यात्राको आनन्द लिन सक्षम हुनुपर्दछ। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जुलाईमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। जुलाई र होक्काइडोको बारेमा प्रश्नोत्तर जुलाई मा होक्काइडोमा हिउँ पर्दछ? जुलाईमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन। के जुलाईहरु मा होक्काइडोमा फूलहरू फुलिरहेका छन्? ल्याभेन्डर जुलाई मा होक्काइडो मा आफ्नो चरम पुगेको छ। विशेष गरी जुलाई को बीच देखि फूल क्षेत्रहरु सुन्दर छन्। जुलाईमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? होक्काइडो जुलाई मा एक गर्मी पर्यटन मौसम हुनेछ। यो चिसो छैन, तर यो बिहान र साँझ चिसो छ। जुलाईमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ? ग्रीष्मकालीन लुगा जुलाईमा ठीक हुनेछ। जे होस्, यो बिहान र साँझ होक्काइडोमा चिसो छ, त्यसैले कृपया ज्याकेट वा कार्डिगन ल्याउनुहोस्। जापानमा ग्रीष्म clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडो भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय कहिले हो? यदि तपाईं हिउँ हिउँदको दृश्यको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ ...
यदि तपाईं जुलाईमा ओसाका जानुहुन्छ भने, कृपया तातो मौसमको लागि तयार हुनुहोस्। ओसाका, अन्य प्रमुख होन्शु शहरहरू जस्तै, जुलाई र अगस्टमा धेरै तातो छ। कृपया सावधान रहनुहोस् किनकि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसलाई प्रत्येक वर्ष तातो स्ट्रोक छ। यस पृष्ठमा, म जुलाईमा ओसाकाको मौसमको बारेमा चर्चा गर्नेछु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। जुलाई मा टोकियो र होक्काइडो को मौसम मा लेख छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। जुलाईमा ओसाकामा मौसम (सिंहावलोकन) ग्राफ: जुलाईमा ओसाकामा तापक्रम परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 30 1981१-२०१०) ओसाकाको मौसम लगभग टोकियो जस्तै छ। तर गर्मी मा यो टोकियो भन्दा केही तातो र अधिक आर्द्र छ। जुलाईको सुरूमा, वर्षा stillतु अझै प्रभावमा छ। वर्षाको मौसम लगभग जुलाई २० को आसपास समाप्त हुन्छ। पछिल्लोमा, ओसाका त्यस समयमा गर्मीमा प्रवेश गर्नेछन्। गर्मीमा ओसाकामा अधिकतम तापक्रम 2010 20 डिग्री भन्दा बढी छ र यो नम पनि छ। यी कारणहरूले गर्दा लामो समय सम्म बाहिर हिंड्नु खतरनाक छ। त्यहाँ दिनहरू जब व्यायाम गर्न धेरै खतरनाक हुन्छ। म चाहान्छु कि तपाई जापान आउनुहोस् तर इमान्दार बन्न म सहयोग गर्न सक्दिन जब ...
जापान एक शीतोष्ण देश हो, तर जुलाईदेखि अगस्टसम्म यो उष्णकटिबंधीय देशमा परिवर्तन हुन्छ भन्न मिल्दैन। टोकियोमा दिनको अधिकतम तापक्रम 35 30 डिग्री भन्दा बढि असामान्य हुँदैन। जसरी डामर सडकहरू घामको तापले तापिन्छ यो वास्तवमै यो भन्दा राम्रो छ जस्तो लाग्छ। यस पृष्ठमा, म जुलाई महिनामा टोकियो मा यात्रा को बारे मा मौसम जानकारी प्रदान गर्नेछ। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जुलाईमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। गर्मीको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। जुलाई मा टोकियो मा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: जुलाई मा टोकियो मा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सी द्वारा जारी डाटा को आधार मा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 1981 2010१-२०१०) जुलाईमा टोकियो साँच्चै तातो छ र ग्लोबल वार्मिंगको प्रभावका कारण यो पहिले भन्दा बढी तातो हुँदै गइरहेको छ। असंख्य वातानुकूलनहरू सञ्चालनमा छन् र शहर केन्द्र निकासबाट तातो हुँदैछ। तल जापान मौसम संघ द्वारा घोषित टोकियोको मौसम विज्ञान डेटा। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, दिनको अधिकतम तापक्रम 30० डिग्री भन्दा बढी छ। मैले परिचितहरूबाट सुनेको छु जो सिंगापुरबाट टोकियो आएका थिए। ...
यदि तपाइँ जापान मा जून को लागी यात्रा गर्न को लागी योजना बनाउनु हुन्छ, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईले आफ्नो यात्रामा Hokkaido जोड्नुहोस्। जापान सामान्यतया जुनमा वर्षा र चिसो हुन्छ। यद्यपि होक्काइडोमा यति धेरै वर्षाका दिनहरू छैनन्। टोकियो र ओसाका जस्तो नभई, तपाई मौसमको हिसाबले रमाइलो समयको आनन्द लिनुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म जून महिनामा होक्काइडोमा मौसमको बारेमा कुरा गर्ने छु। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जूनमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। प्रश्न र उत्तर जूनमा होक्काइडोको बारेमा जूनमा होक्काइडोमा हिउँ पर्दछ? जूनमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन। के फूलहरु जून मा होक्काइडो मा खिलिरहेका छन्? होक्काइडोको फुरानो र बिइमा जून महिनाको अन्तदेखि ल्याभेन्डर फूल्न थाल्छ। यसै महिनामा खस्का र लुपिन पनि फूल्छन्। जूनमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? मौसम जुन जुन मा होक्काइडो मा वसन्त देखि गर्मी को लागी परिवर्तन हुन्छ। सामान्यतया, यो चिसो छैन, तर यो बिहान र साँझ सुन्दर हुन सक्छ। जूनमा होक्काइडोमा हामीले कस्ता लुगा लगाउनु पर्छ? वसन्त लुगा जूनमा होक्काइडो को आरामदायक यात्रा को लागी सिफारिस गरीन्छ। जापानमा वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडो भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय कहिले हो? यदि तपाइँ जाडो हिउँदार परिदृश्यको मजा लिन चाहानुहुन्छ, त्यसो गर्न जनवरी र फेब्रुअरी उत्तम महिनाहरू हुन्छन्। यदि तिमी ...
ओसाका जुनमा मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यदि तपाईं जूनमा ओसाका आउनुभयो भने, कृपया तपाईंको छाता नबिर्सनुहोस्। जुनमा, ओसाका लगभग एक महिनाको लागि वर्षाको मौसममा अन्य प्रमुख होन्शु शहरहरू जस्तै टोकियोमा प्रवेश गर्नेछन्। यस पृष्ठमा, म जूनमा ओसाका मौसमको बारेमा चर्चा गर्नेछु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईलाई अधिक जान्न को लागी महीना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जूनमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। जूनमा ओसाकामा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा जुनमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम अभिकरणले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) ओसाकाको मौसम होन्शुका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै टोकियो जस्ता समान छ। यो जुनमा धेरै वर्षा हुन्छ र दिनहरू तातो र आर्द्र हुन्छन्। त्यहाँ कहिले जाडो हुन्छ जब चिसो हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईं सजिलै चिसो हुनुभयो भने, कृपया कार्डिगन वा यस्तै कपडा लिएर आउनुहोस्। पहिले, जूनमा वर्षा यति भारी थिएन। यद्यपि हालसालै ग्लोबल वार्मि .को कारण मौसम परिवर्तनको कारण वर्षाको मात्रा बढेको छ। यस कारणका लागि, कृपया एक स्रोतबाट पछिल्लो मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गर्नुहोस् जुन TV वा इन्टरनेट वेबसाइट जस्ता नियमित रूपमा अपडेट हुन्छ। जुनमा वर्षाको मौसमको कारण अप्रिल वा मेको तुलनामा त्यहाँ यति धेरै पर्यटकहरू छैनन्। तपाईं हुन सक्नुहुन्छ ...
टोकियोमा जुन महिनामा धेरै वर्षा दिनहरू छन्। आर्द्रता उच्च छ र तापमान स्थिर रूपमा बढ्दछ। त्यसकारण, जुनमा, तपाईंसँग केहि लुगाहरू हुनु आवश्यक छ जुन तपाईं मौसम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जब हामी मिग्ने गर्छौं। यस वर्षाको मौसममा छाता पनि आवश्यक हुन्छ। यस पृष्ठमा, जापान मौसम संघ द्वारा जारी मौसम डेटा सन्दर्भमा, म तिमीलाई जून को टोकियो मा मौसम परिचय गराउनेछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जूनमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। वसन्त र ग्रीष्म clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। जूनमा टोकियोमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: जूनमा टोकियोमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसतमा हो (१ 30 1981१-२०१०) टोकियोमा, वर्षा usuallyतु प्राय: जुन मध्यको बीचमा सुरू हुन्छ। वर्षाको मौसम करिब एक महिना रहन्छ। त्यस पछि, जुलाई २० तारिखदेखि, साँचो गर्मी टोकियो आउनेछ। जूनको अन्तमा, तापमान degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन सक्छ। त्यस समयमा, छोटो-बाहुल्याउने गर्मीका वस्त्रहरू वसन्तको लुगा भन्दा राम्रो हुन्छन्। भर्खरै, टोकियोमा ग्लोबल वार्मिंगका कारण मौसम थोरै परिवर्तन भएको छ। विगतमा, यो वर्षाको मौसममा यति वर्षा भएन ...
यदि तपाई ग्रीष्म Japanतुमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने कस्तो किसिमको कपडा लगाउनु पर्छ? जापानको ग्रीष्म trतु क्षेत्रहरु जस्तै चर्को छ। आर्द्रता पनि उच्च छ। तसर्थ गर्मी को लागी तपाइँ चिसो छोटो बाहुला कपडा तयार गर्न सक्नुहुन्छ जुन गर्मीबाट बच्न सजिलो छ। यद्यपि वातानुकूलन भवनमा प्रभावकारी छ, त्यसैले कृपया कार्डिगन जस्ता पातलो कोटलाई नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा, म जापानी ग्रीष्म photos तका तस्विरहरूलाई पनि सन्दर्भ गर्नेछु र तपाईलाई कस्तो किसिमको कपडा तयार गर्नुपर्नेछ भनेर परिचय गराउनेछु। गर्मीमा म जापानीमा टोपी वा प्यारासोल समर ल्याउने सिफारिश गर्दछु जापानमा होक्काइडो र होन्शुमा उच्च पहाडी बाहेक गर्मी वास्तवमै तातो र आर्द्र छ। कहिलेकाँही जुन जुन चिसो हुन्छ तपाईंलाई पातलो ज्याकेट चाहिएको छ। यद्यपि जुलाई र अगस्टमा यो सामान्यतया तातो हुन्छ र दिनको तापक्रम प्राय: 35 XNUMX डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। तपाईंले उष्ण प्रदेशीय राज्यहरू जस्तै शान्त लुगाहरू तयार गर्नुपर्दछ। तपाई ब्यापार जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ भने पनि, जुलाई वा अगस्टमा तपाईलाई ज्याकेट लगाउने राम्रो अवसर हुँदैन, राम्रो रेस्टुरा वा भोजमा जानु भन्दा बाहेक। हालसालै जापानी मानिसहरु ज्याकेट ज्यादै धेरै व्यवसायमा लगाउँदैनन्। पुरुषहरूको लागि, अधिक व्यक्ति टाई लगाउन सक्दैनन्। किनकि सूर्य कडा छ, यसले प्राय पसिना बगाउँदछ, त्यसैले रुमालहरू अपरिहार्य हुन्छन्। जब तपाईं बाहिर लामो समय सम्म जानुहुन्छ, कृपया टोपी लगाउनुहोस्। प्यारासोल तयार गर्नु महिलाको लागि राम्रो छ। जुलाई वा अगस्टमा बाहिर जानुहुँदा कृपया बारम्बार ओसिलो आपूर्ति गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस् ...
जापानमा जुलाईको जस्तै मौसम पनि एकदम तातो छ। यसका अतिरिक्त टाइफुनहरू प्राय: आक्रमण गर्दछन्। यदि तपाईं अगस्तमा जापानमा यात्रा गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं धेरै यात्रा कार्यक्रममा नजानुहोस्। यस पृष्ठमा, म अगस्तमा जापानको यात्रा गर्दा उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। अगस्तमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारी यदि तपाईं अगस्तमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् र अधिक जानकारी हेर्न जानुहोस्। हामी यो मनमा राख्दछौं कि यो तातो हुन सक्छ र आँधीबेहरी आउन सक्छ ग्रीष्म travelingतुमा जापान यात्रा गर्दा उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र जस्ता जलवायुको बारेमा पर्याप्त सावधान हुनु आवश्यक छ। मैले जुलाईको बारेमा लेखमा यस बुँदाको सारांश दिएँ। त्यसो भए, यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने, कृपया लेख पनि पढ्नुहोस्। जुलाई लेखमा सारांश दिइएका बुँदाहरू निम्न दुई छन्। सर्वप्रथम, दिनको अधिकतम तापक्रम प्राय: ex 35 डिग्री भन्दा बढि हुन्छ, त्यसैले तातो स्ट्रोकबाट बच्न, पानी बारम्बार पिउनु महत्त्वपूर्ण छ। उहि समयमा, किनकि वातानुकूलकले भवनको भित्री भागमा राम्रोसँग काम गर्दछ, त्यसैले म सिफारिस गर्दछु कि तपाईं कार्डिगन ल्याउनुहोस् ताकि शरीर चिसो नहोस्। दोस्रो कुरा, टाइफुन प्राय: जापानमा आक्रमण गर्दछ। त्यसो भए जापान जानु भन्दा पहिले मौसम पूर्वानुमानको बारेमा सावधान हुनुहोस्। यदि एक टाइफुन जापानमा आइपुगेको छ भने, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले यात्राको यात्रा आवश्यक अनुसार परिवर्तन गर्नु पर्दछ। मैले माथि लेखें। अगस्टमा, यी थप बाहेक, ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा पनि छ। यदि तपाईं योजना ...